uju isangweji panel panel | I-china iphaneli yesangweji lezinyosi labenzi, Abahlinzeki
50mm 75mm 100mm ukujiya iphepha lezinyosi isangweji iphaneli yekamelo elihlanzekile esibhedlela ekhiqiza imithi ICU
Uhlelo oluhlanzekile lwodonga lwegumbi luyibhodi elihlanganisiwe elenziwe ngamashidi wensimbi anombala ngokuya ngezinto ezihlukile eziyisisekelo. Izinhlangothi ezine zebhodi ziyaqiniswa futhi zivalwe ngophawu lokuvala. Indawo yokusebenzela ivaliwe ngokusebenzisa ibhodi yokuhlanza, futhi ezinye izinhlelo zingasetshenziswa ukuqinisekisa inhlanzeko ethile. Izinga lesikhala ukuhlangabezana nekhwalithi yokucubungula yezimboni ezahlukahlukene njengokudla, imithi, i-electronics neminye imikhiqizo. Yamukela ishidi lekhwalithi ephezulu ye-PCGI ene-EPS filler. Isandla senziwe ngohlaka lwephrofayili ye-GI noma ye-Aluminium.
Kulula ukufakwa nokuqaqa, ukusebenza okuhle okuphelele.
iphaneli lesangweji lezinyosi le-aluminium lezinyosi ezinamabhodi we-magnesium oxide amabili
iphaneli elincane lesisindo se-aluminium lezinyosi le-aluminium iphaneli elihlanganisiwe lokugoqwa kodonga nokuhlobisa
Iphaneli lezinyosi lesangweji elingacimi umlilo elinebhodi elingqimba kabili le-magnesium oxide yesibhedlela esisebenza ngokudla okwenziwe ngemithi
iphaneli yesangweji lensimbi engagqwali yezinyosi
Yamukela ishidi lekhwalithi ephezulu ye-PCGI ene-honeycomb filler. Isandla senziwe ngohlaka lwephrofayili ye-GI noma ye-Aluminium.